Hangzhou Jie Feng Leisure Product Co. , Ltd သည်တရုတ်နိုင်ငံရှိအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်ထုတ်ကုန်များကိုကျွမ်းကျင်စွာထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး၊ Hangzhou City of Pingyao မြို့တွင်တည်ရှိသည်။ စက်ရုံကို ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင်စတင်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့သည်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်လုပ်ငန်းတွင်အတွေ့အကြုံများစွာရှိသည်။ ကုန်ပစ္စည်းများအတွက်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးနှင့်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။
ဤပစ္စည်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်မူပိုင်ရှိသည်။ ၎င်းကိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သောသဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာစက္ကူဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းပစ္စည်း၏အပေါ်ဆုံးနှင့်အောက်ဘက်တွင်ခြစ်ရာများခင်းထားသည်။ ထူးခြားသောကတ်ထူပြားအနံ့သည်ကြောင်များကိုပိုမိုပျော်ရွှင်စွာကစားရန်များစွာဆွဲဆောင်သည်။ ကုန်ပစ္စည်းသည်သေးငယ်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပမာဏနှင့်တပ်ဆင်ထားသောဖွဲ့စည်းပုံတွင်ရှိပြီးဖောက်သည်အတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုသက်သာစေသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သုံးစွဲသူများကိုတပ်ဆင်ခြင်းပြီးဆုံးသည့်အခါတွင်ပြီးမြောက်အောင်မြင်မှုရရှိစေလိမ့်မည်။
ဤပစ္စည်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်မူပိုင်ရှိသည်။ Eco-friendly E1 level MDF ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဒီဇိုင်းကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်အကုန်ပိုင်းတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပြပွဲတွင်အထူးဂရုပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၂၀ တွင်အလွန်အရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်ရွေးချယ်ရန်ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်အရောင်အမျိုးမျိုးကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်မြှောင်းပုံကတ်ထူပြားသည်လဲလှယ်နိုင်သည်။ ကြောင်အတွက်ပျော်ရွှင်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့အတွက် scratcher အပြင် mouse ကစားစရာထပ်ထည့်ပါမယ်။ သင်ဤစီးရီးကိုစိတ်ဝင်စားလျှင်, ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ! ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အစိတ်ကြိုက်ဒီဇိုင်းလုပ်နိုင်!
ဤပစ္စည်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ပိုင်မူပိုင်ရှိသည်။ ၎င်းသည် Eco-friendly အရည်အသွေးရှိသော E1 level MDF ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ကျနော်တို့ကဘောလုံးနှင့်မြှောင်းပုံကတ်ထူပြားကိုအတူတကွပေါင်းစပ်။ ကြောင်သည်ကုတ်ခြစ်။ ဘောလုံးကစားနိုင်သည်။ စက္ကူခြစ်ရာကစားစရာနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစီးရီးများပုံစံအမျိုးမျိုးကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဤစာရင်း ၃ ခုအပြင်အခြားပုံစံများစွာလည်းရှိသည်။ ဒါ့အပြင်အလယ်မှာခြစ်ရာခြစ်ရာကိုလဲအစားထိုးလို့ရပါတယ်။ ဆိုလိုတာကဒီပစ္စည်းကတာရှည်ခံတယ်။ သုံးစွဲသူများသည်စျေးပေါ။ ကိုင်တွယ်ရလွယ်ကူသောအလယ်အပိုင်းကိုသာအစားထိုးရန်လိုအပ်သည်။ အကယ်။ များ...
တွားသွားသတ္တဝါလှောင်အိမ်သည်ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါများကိုပြုစုပျိုးထောင်ရန်အသုံးပြုသည့်ဗီရိုတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အခန်းများကိုအလှဆင်။ ကိုယ်ပိုင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအနားယူရန်မီးအိမ်နှင့်မီးချောင်းများကိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောပျဉ်ပြားများကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ တွားသွားသတ္တဝါများကိုဥရောပ၊ အမေရိက၊ သင့်ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကြိုဆိုပါတယ်
Eco-friendly E1 level MDF ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ကျနော်တို့ဒီဇိုင်းကိုဖန်ဆင်းနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အများကြီးမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ Cat wall shelf သည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးကြောင်အားကစားစရာနေရာပေးနိုင်သည်။ အလွှာစုံပုံစံသည်ကြောင်၏တောင်တက်ခြင်းအတွက် ပို၍ သင့်လျော်သည်။ လျှော်ကြိုးကော်လံသည်ကြောင်ကို၎င်း၏ခြေသည်းများကိုခြစ်မိစေသည်။ အထူးဒီဇိုင်းနှင့်စျေးပေါသည်။ ဖောက်သည်များစွာက၎င်းကိုထောက်ပံ့ပြီးမြတ်နိုးသည်။
Hangzhou ပြည်နယ်၊ Yuhang ခရိုင်၊
ဖုန်း86-187 5823 6742 / 86-178 2683 3264